Sidaas aad go'aansaday in la siiyo Kratom isku day ah - in lagu siiyo dhiirigelin dheeraad ah, Adkaan walwalka, yareeyo calaamadaha xanuunka, ka dhigi aad wax dheeraad ah bulsho ah ama si fudud kaaga caawiso inaad is iyo dareento in aad fiican. Su'aasha ku xigta waa, waa nooca saxda ah ee Kratom in ay isticmaalaan? hal booqasho A in mid ka mid ah dukaamo badan Kratom online ayaa laga yaabaa in aad ka tagay ceeb by tirada sheer ah fursadaha aad la kulmi. There are dozens of strains of Kratom available and on top of that you have to decide which form you want to use it in. How do you pick what kind of Kratom to use for your first time and what are the distinctions between some of the more popular strains available?
Go'aansiga maxay Nooca Kratom Iibsashada
Marka uu iibsigu geedo yaryar oo dabiici this, waxaa jira saddex waxyaalood oo asaasi ah oo aad u baahan tahay si ay u eegaan: 1) midabka xididka; 2) magaca cadaadis; iyo 3) dejinta. Iyada oo ku xidhan aad rabto, baahida iyo gool, each person will have a different answer to the question of what the best Kratom for them is. There are three different vein colors associated with Kratom leaves – red, cagaaran iyo caddaan. midabada waxaa xiran dabeecadda guud ee saamaynta - i.e. White Vein leaves tend to be more stimulating, Reds ayaa la more sedating iyo Greens yihiin meel u dhaxaysa.
magacyada ka dhur waxaa caadi ahaan loo qoondeeyey oo ku salaysan asalka juqraafi warshad gaar ah. Tusaale ahaan, Thai, Bali, Borneo, Indo iyo Malay jira oo dhan nooc caadi ah Kratom for sale online. Qaar ka mid ah, kuwaas oo u muuqdaan in ay noqon tamar ka badan halka qaar kalena waxaa laga yaabaa in dejinaaya oo loo isticmaali karaa sida xal kale dawooyinka xanuunka dawooyinka. Waxaa jira qaar ka mid ah kala duwanaanshaha muhiimka ah ee guud ahaan nooc kala duwan ee Kratom, laakiin waxaa muhiim ah in aan ka badbadiya kala ah. Sidoo kale waa inaad la xasuusto in qof kasta oo fal kala duwan oo ku salaysan ay dareenka qofka iyo Kiimikada noole. waratada badan ayaa maanta waxaa bixiya baakad sampler oo u oggolaan doonaa inaad isku daydo a nooc dhawr mar oo waxaannu ku talinaynaa in doorashadan wixii dadka isticmaala cusub kuwaas oo doonaya in ay helaan jiifay ka mid ah muuqaalkii.
Go'aanka ugu danbeeya waxaad u baahan doontaa in la sameeyo waa in si aad u iibsato Kratom jajabiyey caleemo, budo cayriin, kaabsoosha ama nooca qaar ka mid ah laga soosaaray sida cusbi a, Tincture ama budada riba. Wixii bilowga ah ugu, ee budo aan laga soosaaray ama irbada ka dhigi doonaa, waayo, hordhaca ah ee ugu fiican. Iyagu waa fududahay in la isticmaalo, cheap, oo aan iska dhigin mid xoog ama tahay inay keenaan dulqaad ama dhinac saamaynta. Budo waa la wada baabbi'in karo "rogrogmadaan oo ku soo maydho" istiraatiijiyad, galay shaaha ama diyaariyey nooca kale ee la karinayo qaar ka mid ah. kaabsoosha gel The ama irbada bdadanina yar waa ka qaalisan, laakiin waa sahlan oo ka dhadhan qadhaadh oo ah budada ah loo ilaaliyo shaki kaaga. doodii Kratom waa in guud ahaan loo hayo dadka isticmaala khibrad sida ay arrin xoog yara yihiin.
Popular Kratom go'a
Mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee Kratom, tixgeliyo si fiican u habboon bilowga ah. Waxay bixisaa waayo-aragnimo fiican oo fekrado iyo waa ku ool ah waayo yaraynayo walaaca iyo kor u qaadida nasashada iyo niyadda wanaagsan. 5g madadaalo: 2/5
Xaalad sii wanaajiyo: 4/5
xanuun qarribma: 5/5
La mid ah caleen Bali ah, laakiin sedating yar yar, dheeraad ah oo ku halmaaami oo lagu yaqaan in ay muddo dheer. Warshad Tani waa run ahaantii aan la koray ee Thailand mar dambe iyo hadda ka timaadaa Borneo. 5g madadaalo: 2/5
xanuun qarribma: 4/5
Green Vein Kratom la og yahay in ay dhiirrigelin ka badan Red, laakiin ma keeno in ka badan-farax, walwalka ama jitters. A tamarta isku dheeli tiran weyn u focus iyo adkeysi. 5g madadaalo: 4/5
Xaalad sii wanaajiyo: 3/5
xanuun qarribma: 2/5
cadaadis Tani waxaa la sheegay in ay heer sare ankii oo kaa caawin kara inaad hesho dano iyo waxay noqon wax soo saar badan. Waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu daweeyo murugada iyo soo saartaa dareen xoog badan oo ah fayo-qabka iyo rajo. 5g madadaalo: 3/5
Xaalad sii wanaajiyo: 5/5
Aad madadaalo ee qaadasho yar yahay, bixinta tamarta coffee-sida, feejignaanta iyo la caddeeyo maskaxda. Users odhan White Vein hagaajinaysaa ay wacyi-, fiirsashada iyo nuglaato in daal. 5g madadaalo: 4/5
cadaadis ugu xooggan ee caleen Kratom maanta iibin, Maeng Da waa derivative a hidaha ee Thai Kratom. Waxay bixisaa tamarta cerebral daran iyadoo user dareen ah fayo-qabka iyo miyir sare. 4g madadaalo: 5/5
Ma u baahan tahay inta badan u xanuun joogto ah, taas oo u fiican
Sida user a maalin kasta waan jeclahay. Waxaan la qabatimay kaniiniga xanuun sannado badan. Kratom i bogsiiyey ee in. Waxa uu i siiyay tamarta iyo Dareenka ka mid ah iyo sidoo kale in ay. Haddaba sharci-darrada ah ee aan dawlad aan qabo safarka rro guud khadka tryro iibsadaan taas oo khatar ka fiirsaneysa waa dambi hadda in aan gobolka. Waa caleen ma daroogada dawooyinka ah Darwiish kor shaybaarka qaar ka mid ah. Xukuumadda aan ka faa'iideysanayaan this lagu iibiyey in ka badan dusha ka si ay u socoto si aad u hesho shirkadda farmashiyaha loo sameeyo. Fadlan faafi erayga